जनता भेट्दा गालामा म्वाइ खादै हिड्ने जनप्रतिनिधीलाई संसदले भने- सिन्को नभाच्ने विकास कसरी हुन्छ ?
२०७६ असार २० शुक्रबार, उनले भने,‘विकास र समृद्धि चिप्ला भाषण गर्दै गालामा म्वाइ खाएर हिड्दैमा सम्भव हुँदैन ।’ कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले विकासका चिल्ला भाषण गर्ने र भेट्दा गालामा म्वाइ खाने अनि विकास निर्माणमा सिन्को नभाच्ने अवस्था देखापरेको गुरुङको भनाइ छ । ... बाँकी अंश»
खुर्सानीबारीमा आगलागी, २८ वस्तुको एकै चिहान
२०७६ असार २० शुक्रबार, तनहुँ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ को टुडास्थित खुर्सानीबारीमा रहेको भैँसी फार्ममा बिहबिार राति आगलागी हुँदा १३ भैँसी र १५ खरायो गरी २८ वस्तु मरेका छन् । ... बाँकी अंश»
ट्रयाक्टरले किचेर एक बालकको घटनास्थलमै मृत्यु
२०७६ असार १९ बिहिबार, पाँचथर । पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मौवा बजारमा ट्रयाक्टरले किचेर बुधबार बेलुका एक बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार १९ बिहिबार, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त महानगर घोषणा गरिएको छ । महानगरपालिका भित्रका सबै घरमा शौचालय निर्माण भए संगै बुधबारबाट खुला दिसामुक्त महानगर घोषणा गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
डाँका समूहबाट लाखौँको लुटपाट, डाँकासंगको झडपमा तीन स्थानीय गम्भीर घाइते, एक डाँका पक्राउ
२०७६ असार १९ बिहिबार, महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवासमा डाँकाको एक समूहले क्रमबद्ध रूपमा दुई घरमा डकैती गरेको छ । गए राति बर्दिवास नगरपालिका वडा नं ६ र ७ मा पर्ने प्रेमनगरमा सो समूहले रु १५ लाख बराबरको धनमाल लुटेर फरार भएको हो । ... बाँकी अंश»
जीपी जयन्तीमा वृक्षारोपण
२०७६ असार १८ बुधबार, धरान । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जन्मजयन्तीको अवसरमा वृक्षारोपण गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार १८ बुधबार, राजापुर । मरेको बाघको जुँगा उखेल्नुलाई परम्परागत नेपाली समाजमा पुरुषार्थ मानिँदैन । तर वातावरण सचेत आधुनिक राज्यमा त्यो विषय महङ्गो पर्छ । ... बाँकी अंश»
नेपालले लिँदै आएको एक चीन नीतिको चीनद्धारा प्रशंसा, सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
२०७६ असार १८ बुधबार, बुटवल । चीन भ्रमणमा रहेका प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले चीनको सिचुवान प्रान्तका उच्च सरकारी अधिकारी तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
नदीले बगाएर दुई बालक बेपत्ता
२०७६ असार १८ बुधबार, गलेश्वर । पौडी खेल्ने क्रममा म्याग्दी नदीले बगाउँदा बेनी नगरपालिका वडा नं ३ दुधेखोलाका दुई बालक बेपत्ता भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार १७ मंगलबार, मुग्लिन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । मंगलबार साँझदेखि परेको झरीका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना– ६ स्थित चार किलोमा राति ९ः३० बजे पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार १७ मंगलबार, स्याङ्जा । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत ईन्जिनीयर घुस लिएको रकम सहित अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको छ । ... बाँकी अंश»
राजधानीमा बस र माइक्रो ठोक्किए, १७ घाइते, दुई गम्भीर
२०७६ असार १७ मंगलबार, काठमाडौँ । काठमाडौँको सिनामङ्गलमा सवारी दुर्घटना हुँदा १७ यात्रु घाइते भएका छन् । मंगलबार बिहान गौशालाबाट कोटेश्वर जाँदै गरेको बा५ख ५१०० नंको माइक्रोबस र कोटेश्वरबाट गौशाला जाँदै गरेको बा१ज ९७६६ नंको बस एकापसमा ठोक्किँदा १७ यात्रु घाइते भएका हुन् । ... बाँकी अंश»
पाँच घरमा एकै रात लुटपाट र चोरी
२०७६ असार १७ मंगलबार, सप्तरी । सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा सोमबार राति पाँच घरमा चोरी भएको छ । वडा नं २ भुर्कीका कैलु चौधरी, सुनिल चौधरी, परमेश्वर राम, जङ्गल राम र झमेली सदाको घरमा चोरी भएको हो । ... बाँकी अंश»
एक दर्जन छात्रामा मास हिस्टेरिया
२०७६ असार १७ मंगलबार, लम्की । कैलालीको भजनी नगरपालिका–१ स्थित महुन्याल माध्यमिक विद्यालय भजनीमा अध्ययनरत छात्रामा अनौठो समस्या देखिएको छ । ... बाँकी अंश»
बाढीले पक्की पुल बगाएपछि काठको फड्केबाट मनाङको यात्रा
२०७६ असार १६ सोमबार, मनाङ । बाढीले पक्की पुल बगाएपछि सम्पर्कविच्छेद भएको मनाङ जोड्ने म्यार्र्दी खोलामा काठको फड्के बनाइएको छ। ... बाँकी अंश»
मलामी गएका चक्रबहादुर सेती नदिमा नुहाउने क्रममा वगेर वेपत्ता
२०७६ असार १६ सोमबार, छिमेकिको मलामी गएका कुण्जेडा दिउँसो साढे वाह्र वजे तिर सेती नदिमा नुहाउने क्रममा वगेर वेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायव उपरीक्षक लालबहादुर धामीले जानकारी दिए । दीपायल सिलगढी नगरपालिका–५ सेती नदी पुल नजिकैबाट उनि बगेर वेपत्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका धामीले बताए। ... बाँकी अंश»
बालुवाको ढिस्कोमा पुरिदा चाखुडीको मृत्यु, तीन जना घाइते
२०७६ असार १६ सोमबार, बझाङ । बझाङको बित्थड चिर गाउँपालिका ५ ओसैलमा सोमबार बालुवा खानी भत्केर एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»
मध्यरातको दुर्घटनाले पाँच घाइते तीनको अवस्था गम्भीर
२०७६ असार १६ सोमबार, रुकुमपूर्व । रुकुमकोटबाट मुसीकोटतर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ४११५ नम्बरको जीप सिस्ने गाउँपालिका–६ को पाखागाउँमा राति १२ बजे दुर्घटना हुँदा पाँच जना घाइते भएका छन् भने तीनको अवस्था गम्भीर रहेको छ । ... बाँकी अंश»
मोटरसाइकल र ट्रक जुध्दा एकको मृत्यु, एक गम्भीर
२०७६ असार १६ सोमबार, चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा मोटरसाइकल र ट्रक एकापसमा ठक्कर खाँदा एकको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् । ... बाँकी अंश»
गौ संरक्षण केन्द्रका ४६ गाई मरे, यी हुन् कारणहरु
२०७६ असार १६ सोमबार, दमौली । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ घारीस्थित गौ संरक्षण केन्द्रका ४६ गाई मरेका छन् । बाघको आक्रमण, स्वास्थ्य जाँच र पोषण अभावमा केन्द्रमा रहेका ४६ गाई मरेका हुन् । ... बाँकी अंश»